Eksaody 13 - Ny Baiboly
Eksaody toko 13
Fanokanana ny lahimatoa ho an'Iaveh - Ny nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny làlan'ny efitra - Ny andry rahona.
1Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy ka nanao hoe: 2Atokany ho ahy ny lahimatoa rehetra, izay lahimatoa rehetra amin'ny zanak'Israely, na olona na biby, fa ahy izany.
3Dia hoy Moizy tamin'ny vahoaka: Tsarovinareo ny andro nivoahanareo tany Ejipta, tamin'ny trano fanandevozana, fa tamin'ny herin'ny tànany no namoahan'ny Tompo anareo tany. Tsy hatao mihina-mofo misy lalivay. 4Izao andro ivoahanareo izao dia volam-pahavokaram-bary. 5Ary raha avy izay hahatafidiran'ny Tompo anao any amin'ny tanin'ny Kananeana, ny Heteana, ny Amoreana, ny Heveana ary ny Jeboseana, izay nianianany tamin'ny razanao homeny anao, tany tondra-dronono aman-tantely, dia hataonao izany fomba masina izany, amin'ny volana toy izao. 6Hafitoana no hihinananao mofo tsy misy lalivay, ary amin'ny andro fahafito hisy fety fankalazana an'ny Tompo. 7Mandritra ny hafitoana no hihinanana mofo tsy misy lalivay; tsy hahitana mofo voaisy lalivay ao aminao: tsy hahitana lalivay ao aminao, eran'ny taninao rehetra; 8Ary amin'izay hianao hilaza amin'ny zanakao lahy hoe: Fahatsiarovana ny nataon'ny Tompo tamiko, fony aho nivoaka tany Ejipta, izany. 9Ary ho anao dia ho toy ny famantarana mipetaka amin'ny tànanao izany sy ho toy ny fahatsiarovana tsy hiala eo anelanelan'ny masonao, mba ho eo am-bavanao ny lalàn'ny Tompo; satria tamin'ny tànany mahery no namoahan'ny Tompo anao tany Ejipta. 10Hotandremanao amin'ny fotoany, isan-taona isan-taona, izany didy izany.
11Raha avy izay hahatafidiran'ny Tompo anao any amin'ny tanin'ny Kananeana, araka ny efa nianianany taminao sy tamin'ny razanao, ka ho efa voatolony anao tokoa izany, 12dia hatokanao ho an'ny Tompo ny lahimatoa rehetra, ary koa ny lahy voalohan-teraky ny biby izay hanananao, fa an'ny Tompo ny lahy. 13Avoty amin'ny zanak'ondry ny voalohan-teraky ny ampondra, fa raha tsy avotanao dia folahy ny hatony; ary avoty koa ny voalohan-terak'olombelona rehetra amin'ny zanakao lahy. 14Ary indray andro raha avy izay hanontanian'ny zanakao anao hilaza hoe: Inona no hevitr'izao? Dia hovalianao hoe: Tamin'ny tànany mahery no namoahan'ny Tompo anay tany Ejipta, tamin'ny trano fanandevozana. 15Fa rahefa nikiry tsy nety nandefa anay Faraona dia novonoin'ny Tompo ny lahimatoa rehetra tamin'ny tany Ejipta, hatramin'ny lahimatoan'ny olona, ka hatramin'ny lahy voalohan-teraky ny biby. Izany no anolorako ny lahy voalohan-teraka rehetra ho sorona amin'ny Tompo sy hanavotako ny lahimatoa rehetra amin'ny zanako lahy. 16Ho toy ny famantarana mipetaka amin'ny tànanao izany sy ho toy ny fehin-kandrina eo anelanelan'ny masonao, fa tamin'ny herin'ny tànany no namoahan'ny Tompo antsika tany Ejipta.
17Nony nalefan'i Faraona handeha ny vahoaka, dia tsy nentin'Andriamanitra hihazo ny làlana amin'ny tanin'ny Filistìna, na iny aza no akaiky, satria hoy Andriamanitra: Sao dia manenina ny vahoaka raha mahita ny ady, ka hiverina any Ejipta. 18Fa nentin'Andriamanitra niolaka ny vahoaka nanaraka ny làlan'ny efitra mankany amin'ny ranomasina Mena. Tamim-pilaminana tsara no niakaran'ny zanak'Israely avy tany Ejipta. 19Ary nentin'i Moizy niaraka taminy ny taolam-balon'i Josefa, araka ny nampianianan'i Josefa ny zanak'Israely hoe: Hovangian'Andriamanitra hianareo, ka ento lavitra miaraka aminareo hiala aty ny taolam-baloko.
20Niala tao Sokota izy ireo dia nitoby tao Etama, an-tsisin'ny efitra. 21Iaveh nandeha teo alohany amin'ny andry rahona raha antoandro hitari-dàlana azy, ary amin'ny andry afo nony alina, mba ho afaka handeha, na andro na alina izy. 22Tsy niala teo alohan'ny vahoaka ny andry rahona raha antoandro, sy ny andry afo nony alina. >